Farmaajo “Hadii canshuur aan la bixinin dowladdu horumar ma sameeynayso..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo “Hadii canshuur aan la bixinin dowladdu horumar ma sameeynayso..” (DHAGEYSO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo habeenkii xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabad lagu xusaayay maalinta dhalinyarada ee 15-ka May ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay bixiyaan canshuurta, si uu dalka horumar u gaaro.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in horumarka dalka uu ku jiro in shacabka ay bixiyaan canshuurta, isagoona dhinac kale sheegay in ereyga “Canshuur” la badali doonno hadii ay ogolaadaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana laga dhigi doono magaca “Qaaraan Qaran”.
Wuxuu madaxweyne Farmaajo ku dooday in magaca “Canshuur” uu muujinayo in bulshada si qasab ah wax looga qaadaayo, sidaas darteed ay haboon tahay in magaca “Canshuur” loo badalo “Qaaraan Qaran”.
“Hadii canshuur aan la bixinin dowladdu horumar ma sameeynayso, maxaa yeelay dalalka aad arkeysaan oo dowladahooda horumaray waxay shacabkooda bixiyaan canshuurta, qofka hadii uusan canshuur bixin muwaadin ma ahan, dalka waa degganahay oo kaliya muwaadin laguma noqdo, waxaa muwaadin lagu noqon karaa in canshuurta la bixiyo, si uu dalka horumar u gaaro, magaca Canshuur waa la badali doonnaa hadii xildhibaanada baarlamaanka ogolaadaan, waxaana loo bixin doonnaa magaca Qaaraan Qaran”. Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.